China CoSee Anti Fog Glasses Lens Cleaner Solution Ulwelo Defogger Spray for Eyeglass yoMvelisi kunye noMthengisi | Co-Bona
CoSee Anti Fog Glasses Lens Cleaner Solution Ulwelo Defogger Spray for Eyeglass
Umthamo: 30ml Isiphumo senkungu: malunga neeyure ezi-6 zokwenza ulwenziwo: sebenzisa isincamathelisi okanye uprinte ngqo kwibhotile ye-PET Ixabiso: $ 0.9- $ 1 / ibhotile MOQ: Ukuba akukho ulwenziwo, qala kwibhotile enye
Iiglasi, isikrini sekhompyuter, isikrini esikwiselfowuni, isipili njl njl
1. Inkungu echaseneyo
2. Ukuveliswa kwemasifundisane engenathuli
3. Thintela inkungu kwiilensi
4. Akukho phawu lwamanzi
Inqanaba inkungu Anti
Iibhotile ezingama-25 kwibhokisi yephepha, iibhokisi zephepha ezili-12 ezikwibhokisi yebhotile, iibhotile ezingama-300 ezikwibhokisi yebhokisi (ibhokisi eqhelekileyo yokuthumela ngaphandle)
Uhlalutyo lweNqobo yokulwa inkungu:
Izibuko zigxotha amathontsi amanzi. Amaconsi amanzi awakwandiswa.
Ulwelo oluchasene nenkungu lubambelela ngokuqinileyo kumphezulu welensi emva kokufaka isicelo.
Arhente Anti-fogging kunye namanzi droplet fusion. Nciphisa uxinzelelo lwamanzi kumphezulu wamanzi.
Ukuyilwa kwefilimu yamanzi ecekeceke. Ukuphelisa ukuphinda kuphume amanzi ngokucacileyo.
Inkungu echasene noko ilungele nawuphi na umphezulu kunye nohlobo lweelensi ukusuka kwimigogo ukuya kwiiglasi okanye kukhuseleko olwenziwe ngokwesiko. Nje ukuba isetyenziswe, iya kushiya ifilimu encinci yokuzikhusela, iyeke ukufuduswa kukujija iilensi. I-Co-See Anti-fog Spray ikwayi-anti-bacterial spray ephelisa amabala kwaye igcine indawo ecocekileyo.
• Thintela ukungalunganga kunye nenkungu
• Intsholongwane yebacteria
• Khusela iilensi neeglasi
• Kukhuselekile kuzo zonke iintlobo zamehlo
Inkxaso yokwenza ngokwezifiso:
Inkqubo yeLens Spray Production:
1 logo enokwenziwa
4.Imilo eyenziwe ngokwezifiso
Uyilo olwenziwe ngokwezifiso
Izinto ezinokwenziwa ngokwezifiso
Imveliso ye-1 yeebhotile-gcwalisa ulwelo
I-Wuxi Co-Bona ukupakisha i-Co, Ltd. ngumvelisi welaphu lelensi, ukucoca iilensi kunye nezinye izinto ezibonelela ngeglasi eChina. Sinokubonelela ngenkonzo yokumisa sinye kuzo naziphi na iimfuno ezibonakalayo. Sikhonza kwiivenkile ezininzi ezibonakalayo kunye namaziko e-optometry iminyaka emininzi. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kule ndawo kunye ne-FDA, i-ISO njl.nesiqinisekiso semfundo kunye nomgangatho ogqithileyo.
Masiqhubeke sikhuphisana kakhulu kwintengiso yangoku. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
Egqithileyo Eyona ndlela intsha yeFashoni ePhambili yesakhelo sePilato sePumlo sePumlo seLanga
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu weMixed Colours yeNylon eguqulwayo yokuFunda iiglasi Cord Neck Sunglass Retainer Strap
Umgangatho ophezulu weMixed Colors yeNylon eFundekayo ...
Iipads zempumlo zeSilicone zeglasi anti-slip adhesi ...
Ehlala Multi Imibala Best Microfiber Lens Eyegl ...